ကာ့ဒ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ တူရကီထိုးစစ် ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ စတင်
ကာ့ဒ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ တူရကီထိုးစစ် ဆီးရီးယားမြ...
9 ต.ค. 2562 - 22:41 น.
အမြောက်လက်နက်ကြီးတွေ သယ်ထားတဲ့ တူရကီ စစ်ယာဉ်တန်း ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကို ချီတက်
ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ တူရကီတပ်တွေ ထိုးစစ်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီရဲ့ အဲဒီ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာ အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ် အဲဒီနယ်မြေမှာ ရှိတဲ့ ကာ့ဒ်မျိုးနွယ်စု လက်နက်ကိုင်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းတပ်နဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်တွေကို အိုးအိမ်တွေ နေရာချပေး နိုင်ဖို့ရာ ကာ့ဒ် လက်နက်ကိုင်တွေကို ဖယ်ရှားပြီး "လုံခြုံရာဇုန်နယ်မြေ" ဖန်တီးရေး အတွက် စစ်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ တူရကီ သမ္မတ ရာဂျစ် တိုင်ရစ်(ပ) အာဒိုဝမ်က ပြောပါတယ်။
ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ ဦးဆောင်တဲ့ ဆီးရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစု SDF ရဲ့ အဆိုအရ တူရကီ စစ်လေယာဉ်တွေဟာ လူနေအရပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တူရကီ ကို ပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန် ချမှတ်
နှစ်တစ်ရာအတွင်း အာဏာအပြင်းဆုံး သမ္မတ
ပေါက်ကွဲသံတွေ နယ်စပ်မြို့တွေမှာ ကြားနေရ
တူရကီထိုးစစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားရသမျှ အချက်တွေ
တူရကီနဲ့ နယ်စပ် ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း နယ်ခြား မြို့တွေ ဖြစ်တဲ့ ရာ့ပ်စ် အယ်လ်-အင် နဲ့ တဲလ် အက်ဘက်ယာ့ဒ် မြို့တွေကနေ ကျယ်လောင်တဲ့ ပေါက်ကွဲသံတွေ ကြားနေခဲ့ရတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ပြောပါတယ်။
ဒေသတွင်း အရပ်သားတွေကြား အင်မတန် ကြောက်လန့် နေကြတယ်လို့ SDF ရဲ့ ပြောခွင့်ရ မူစတာဖာ ဘာလီက ဆိုပါတယ်။
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ လေယာဉ်မပျံသန်းရ ဇုန် သတ်မှတ်ပေးပါ ဆိုပြီး အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ် အုပ်စုကို SDF က တောင်းဆိုပါတယ်။
အဲဒီ ဒေသမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ထူထောင်ထားတဲ့ ကာ့ဒ်ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က အရပ်သားတွေကို တူရကီနဲ့ နယ်စပ်ဘက် ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းနေပါတယ်။
ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း ကင်းလှည့်နေတဲ့ တူရကီ သံချပ်ကာကား
ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ နေရာချထားတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကို ဝေဖန် ကန့်ကွက်မှုတွေ ကြားထဲကပဲ သမ္မတ ထရမ့်က ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပြီးနောက်၊ အခုလို တူရကီရဲ့ ထိုးစစ် စတင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်ဟာ တူရကီသမ္မတ အာဒိုဝမ်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အကုန်တုန်းက တယ်လီဖုန်းကနေ ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုခဲ့ အပြီး ဆီးရီးယားနဲ့ တူရကီ နယ်စပ်မြို့ နှစ်ခုအနီး နေရာချထားတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတွေကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အမေရိကန် ပြည်တွင်းမှာရော၊ နိုင်ငံတကာကရော အတော်လေး ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကာ့ဒ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တည်ရှိခြင်း အပေါ် တူရကီ မလိုလားရတဲ့အကြောင်း
ဆီးရီးယား နိုင်ငံထဲ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ အဖွဲ့ IS ကို ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ကာ့ဒ်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ကဏ္ဍက အဓိက နေရာမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ IS အဖွဲ့ဝင် သုံ့ပန်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ စခန်းတွေကို ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့က ထိန်းချုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
IS ချေမှုန်းရေးမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့
အခုလို တူရကီဘက်က အဲဒီဒေသမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ အခါ IS တွေ ရှိနေတဲ့ အဲဒီ စခန်းတွေကို ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ လုံခြုံအောင် ဆက်ပြီး ထိန်းနိုင်စွမ်း ရှိနိုင်မှာလား ဆိုတဲ့ အပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
တူရကီမှာ ကာ့ဒ်မျိုးနွယ်စု လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပုန်ကန်မှု ရှိပါတယ်။ ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်းက ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ဟာလည်း တူရကီထဲက ခွဲထွက်ရေး ကာ့ဒ် သူပုန်တွေနဲ့ တဆက်တစပ်တည်း အတူတူအဖြစ် တူရကီ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
တူရကီရဲ့ အလိုအရတော့ တူရကီတောင်ပိုင်း၊ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း ဒေသမှာ ကာ့ဒ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ သူပုန်အဖွဲ့ဟာ အကြီးမားဆုံး အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဖြစ်တယ် လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
"တူရကီလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဟာ ဆီးရီးယား အမျိုးသား တပ်မတော် (တူရကီအစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့) နဲ့အတူ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းက ကာ့ဒ်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ IS တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ #OperationPeaceSpring #ငြိမ်းချမ်းရေးနွေဦး စစ်ဆင်ရေး စတင်လိုက်ပြီ" လို့ တူရကီ သမ္မတ အာဒိုဝမ်က တွစ်တာ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ် ရေးသားပြီး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တောင်ဘက်ပိုင်းနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက် လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက် ဟန့်တားနိုင်ဖို့နဲ့ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ ရည်မှန်းတယ်" ဆိုပြီး သမ္မတ အာဒိုဝမ်က ပြောပါတယ်။
"ဆီးရီးယားရဲ့ ပိုက်နက်နယ်မြေ တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့ ကာကွယ်သွားမှာ ဖြစ်သလို၊ ဒေသတွင်း လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းတွေကိုလည်း အကြမ်းဖက်သမားတွေရန်က လွတ်မြောက်စေရမယ်" လို့လည်း တူရကီသမ္မတက ဆိုပါတယ်။
တူရကီထဲ ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေ သန်းပေါင်းများစွာ လက်ခံထားရ
တူရကီတွေ အနေနဲ့ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ ကာ့ဒ် လက်နက်ကိုင်တွေကို ဖယ်ရှားပြီး သူတို့အခေါ် "လုံခြုံရာဇုန်နယ်မြေ" ဆိုတာကို ဖန်တီးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
တူရကီမှာ လက်ခံထားတဲ့ ဆီးရီးယား စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် သုံးသန်းခြောက်သိန်းကို အဲဒီ "လုံခြုံရာဇုန်နယ်မြေ" မှာ ပြန်လည် နေရာချပေးမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တူရကီနဲ့ ဆီးရီးယား နယ်စပ်မှာ နေရာချထားခဲ့တဲ့ အမေရိကန် စစ်တပ် အင်အားဟာ သိပ်တော့များများစားစား မရှိပါဘူး။ ရာဂဏန်းအောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်တပ်ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ် ကာ့ဒ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ SDF တပ်ဖွဲ့ အတွက်တော့ လုံခြုံမှု ရနေစေခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်က အမေရိကန်တပ်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ အခါ၊ အဲဒီ အပြုအမူဟာ နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးသလိုမျိုး သစ္စာဖောက်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် SDF က ရှုမြင်ပါတယ်။
သမ္မတထရမ့် အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်တွင်းမှာလည်း ရီပတ်ဘလစ်ကင် ပါတီတွင်းမှာပါ ဝေဖန်ပြစ်တင် ခံရပါတယ်။
ထရမ့်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကို ဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တူရကီဘက်က စည်းကျော်ဘောင်ကျော် ပြုမူလာခဲ့ရင် တူရကီရဲ့ စီးပွားရေး အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းသွားအောင် လုပ်ပစ်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကာ့ဒ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ တူရကီထိုးစစ် ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ စတင်